Usoro Ahụ Ike Uche nke Prince Harry Iji Zụlite On Apple TV + N'oge opupu ihe ubi | Esi m mac
Usoro Prince Harry banyere ahụike ọgụgụ isi iji zụọ Apple TV + na oge opupu ihe ubi
Ọrịa coronavirus ahụ akpọnwụwo ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ọrụ audiovisual na usoro, ihe nkiri, akwụkwọ akụkọ ... na-egbu oge ma ndekọ na nke mbụ na ọtụtụ n'ime ha. Otu n'ime oru ngo ọ kpọnwụrụ ngwa ngwa ọ malitere ọ bụ usoro usoro nyocha nke Prince Harry (Duke nke Sussex) na Oprah Winfrey.
Usoro ihe omuma nke Prince Harry mebere oprah mmekota E mere ndokwa ka ọ pụta ìhè na Apple TV + na 2020, agbanyeghị, n'ihi ọrịa coronavirus na njedebe nke ọrụ ezinụlọ na ezinụlọ ndị isi nke Prince, ọ ga-emecha gosipụta na mmiri.
Dị ka akwụkwọ akụkọ Bekee bụ Sun si kwuo, ọtụtụ abụwo ihe ndị emetụtala usoro nke usoro a, ọ bụghị naanị coronavirus. Mkpebi Harry na nwunye ya, ịkwụsị ime ihe omume gọọmentị nke Royal Royal nke Britain na Machị 2020 na nnyefe ha na United States, sokwa na igbu oge ọrụ a.
Mmekọrịta na Oprah
Na Eprel 2019, mmekorita nke Prince Harry na Oprah na Apple TV + iji mepụta usoro banyere ihere nke nsogbu ahụike uche. Ọ bụ ndị isi kwupụtara usoro a site na akaụntụ Instagram ha, usoro nyocha nke ga-edozi nsogbu ahụike ọgụgụ isi gburugburu ụwa, ọ bụghị naanị na United Kingdom.
Prince Harry kwuru ọnwa ole na ole gara aga na:
Ekwenyere m n'ezie na ezi ahụike ọgụgụ isi - ahụike ọgụgụ isi - bụ isi ihe na-eduga n'ọchịchị dị ike, obodo ndị na-arụpụta ihe, yana mmadụ nwere nzube. Ọ bụ nnukwu ọrụ ị nweta ikike a ka anyị na-ewetara gị eziokwu, sayensị, na mmata nke esemokwu dị mkpa n'oge a.
Olileanya anyị bụ na usoro isiokwu a dị mma, na-enye ihe ọmụma ma na-etinye aka na ya - ịkekọrịta akụkọ zuru ụwa ọnụ nke mmụọ mmadụ na-enweghị atụ na-alụ ọgụ site na ebe ndị kachasị njọ, na ohere iji ghọta onwe anyị na ndị gbara anyị gburugburu. Enwere m obi ụtọ na m na-arụ ọrụ n'akụkụ Oprah na usoro a dị mkpa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Usoro Prince Harry banyere ahụike ọgụgụ isi iji zụọ Apple TV + na oge opupu ihe ubi
Apple Music na-agbakwunye otu ọhụrụ: Mma +
Ngwa amphetamine ga-agbanwe aha ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ịga n'ihu na Mac App Store